Yintoni ongayenza Ukuba Ulahlekelwe Umnqweno Wakho kwiPaint
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Udweba
Umbuzo: Ndilahlekelwe ngumonde wam kwiPaint, naziphi na izimvo?
"Kwiminyaka engama-10 edlulileyo ndagqiba ekubeni ndibe nopopu lweoli, into endiyifunayo ukuba ndiyenze." Andizange ndifunde, ndaqala ukubeka upende kwinqwelo. wayefuna umzobo ...
Ngokuzenzekelayo yonke iminqweno yokupenda iveza. Ndazama kwaye ndazama kodwa iziphumo zibuhlungu. Akukho nto ibuyisela umlilo okhululekileyo woluhlu lwesine. Ndine talente, izixhobo, iincwadi kunye neevidiyo, kodwa kungekhona ukuthanda. Andikwazi ukufumana izifundo zangempela kunye nokuzonda ukupenda kwipayiti kunye nephutha lokudweba. Ngaba ubani ufumene ingcamango? "- U-Ed Martell
Iingcamango ezininzi zenzeke kum, eziphathelele umonakalo owenziwe ukuhlaziywa kobugqwetha onalo mzobo wokuqala kunye neendleko zobugcisa. Kodwa okokuqala, yayiyi- Art and Fear phakathi kweencwadi ozifundileyo?
Ndicinga ukuba le ncwadi encinci ayinakulinganiswa ekujongeni ukwesaba nokuzithemba okuvela ekudalweni kwepeyinti. Ikopi yam igcwele imihlathi egciniweyo, kwaye ndidibanisa rhoqo ukuze ndikhumbuze. Nantsi isampulu catshulwa, ukusuka kwiphepha lesihlanu: "Umsebenzi wobuninzi bobugcisa bakho ukukufundisa indlela yokwenza inxalenye encinane yomsebenzi wakho ohamba."
Indumiso ingakubeka ngokusweleka
Emva kokuba wamkele isigwebo sesinye somfanekiso wesine njengomzobo omele ufune ukuwufuna, uzama ukuphinda uphinde udwebe xa uqala entsha. Oku kulungiselelwe ukungaphumeleli njengoko ungazenzeli indawo yokudala kodwa ukubeka iiparameters ngaphambi kokuba uqalise.
Uvuyo lwepeyinti luvela kwisenzo sokudalwa kakhulu kunomveliso ogqityiweyo. Kwaye kufuneka uzinike imvume yokubeka umngcipheko ukusilela kwaye ufunde / uhlolisise ngexesha le nkqubo. Funda le nqaku Ukudanisa i-Painting ngencazelo epheleleyo yale nto.
Ukuxinezeleka Kuvimbela ukudala
Ukukhathazeka ngokutshabalalisa izinto zobugcisa kuphazamisa kakhulu kuba njalo xa udibanisa ngaphandle kwiphubhu ocinga ngayo malunga neendleko.
Uyanqikaza ukuphinda uphinde usebenze okanye uqhekeza icandelo nangona uyazi ukuba iphosakele kuba ivakalelwa njengenkunkuma. Ukuxhalabisa kukuphelisa ukuzonwabisa kwakho.
Akungabazeki ukuba imibala yeoli kunye ne-tovas ayinancinci, ngoko gcina iliso kwi-art yakho yasekuhlaleni yokugcina impahla kunye nayiphi na into ekhethekileyo okanye ukuthengiswa kwaye ube nemali encinci ibekwe kwicala elinye xa kwenzeka le nto. Ukuba ivenkile ye-intanethi inikeza iikhathalo ezikhethekileyo okanye ukuhanjiswa kwamahhala kwimiyalelo eninzi, khangela ukuba awukwazi ukufumana abahlobo okanye uluntu lobugcisa ukwenza umyalelo odibeneyo.
Gcina ipeyinti ngokusebenza kwiindawo ezincinci kunezikhulu. Gcina kwixabiso lempahla ngokupenda kwikhadibhodi okanye kwiindawo ezinokuthi uzibonge. Funda ukululalisa zakho izithintelo (kodwa jonga iindleko zabalula, i-staples, i-canvas, kunye ne-primer musa ukuthenga ngaphezu kokuthenga izithintelo ezenziwe ngokulungeleleneyo). Ungakwazi nokwenza iibhendi zakho xa unako izakhono ezisisiseko zokwenza umsebenzi (okanye ukwazi umntu owenzayo).
Nciphisa inani lemibala oyisebenzisayo, ungakhohliswa ekuthengeni ezininzi. Uya kukwazi iipropati zombala ngamnye ngamnye ngokwenene kwaye uza kwenza ntoni xa uxutyaniswa nabanye.
Ukuze ufumane uvuyo lwepeyinti nje ngenxa yokupenda kwakhona ngaphandle kokukhathazeka ngeendleko zobugcisa ozisebenzisayo, zithengise iipiniti ezincinane zamanzi kunye ne- brush yamanzi yokudlala kunye nokudweba.
Ndiyazi ukuba ukudweba nge-watercolor kuhluke ngokupheleleyo ukupenda ngeoli, kodwa abapapashi abaninzi abadumileyo basebenzisa i-watercolors, kuquka i-Turner. Kukho indleko zokuqala, kodwa ipeyinti ye-watercolor ihamba ngendlela ende kwaye unokwenza isicatshulwa kuyo nayiphina iphepha, kuquka i-mail engenayo iipiliphu.
Zinike imvume yokuphumelela
Phindela emva kwengcinezelo yento oyenzile. Zinike imvume yokuba ungayi kupenda "uqedile imidwebo" okanye " ubugcisa obuhle ", ukuba ungaphathi "isihloko sonke", kwaye ungabonakali nabani na omnye into oyenzile okanye esebenza ngaphandle kokuba unqwenela ukwabelana.
Esikhundleni sokujongana nepeyinti yonke yomhlaba, peyinisa nje nje ngomthi, isebe, okanye ukutyekwa kwegxolo. Sebenzisa ixesha lokujonga imibala, izithunzi kunye neengqamaniso. Yenza ipeyinti encinci yee-paintings of the paintings you use to mix the colors in landscape.
Funa ukuzonwabisa ekuqwalaseleni imvelo, ekuboneni iinkcukacha, ukutshintsha ekukhanyeni kokutshintsha. Izinto ezikutsala kwindawo yokuqala kwindawo. Bhala amanqaku, yenza imidwebo emincinci, unamathele kumagqabi kunye neentyantyambo ... nantoni na into ebonisa ukuba usebenzisa ixesha lokubheka, kungekhona nje ukuthatha i-snapshot esheshayo.
Ukubeka oko uzimisele ukukufezekisa ekuhambeni kwakho kobuciko ngumfanekiso wakho wesine kuphela uthetha ukuba uhambe ngokukhawuleza xa uhamba. Yenza uvuyo ngokwazi ukuba unako kwaye uphawule into eneliseke ngayo (njengabanye). Ngoku yibona okunye ongakwenza xa ungagxininisi kwisiphumo sokuphela.
Yintoni uGesso ekuPahleni?
Iincwadi ezi-7 eziphezulu kwiMbala yabaDumi
Iingcaphuno kwiPainting and Art evela kuVincent van Gogh
I-Acid Dissociation Inkcazelo rhoqo: Ka
Iziseko zeCricket Pitch